शब्दक्षेत्र: January 2014
सम्बृद्ध समाजलाई धन्यवादसहित ।
युवा साहित्यकार सुवास खनालसंग शनिबारीय साहित्य वार्ताः
सही ढङ्गले आएका सुझावलाई मनन गर्न यथासम्भव कोसिस गर्नेछु ।
एउटा उत्कृष्ट रचनाले नै साधारण व्यक्तिलाई साहित्यकारको परिचय दिलाउँछ । रचनाको उत्कृष्टता नै व्यक्तिको साहित्यिक परिचयको आधार पनि हो । रचना प्रकाशन भएपछि धेरै खाले टीकाटिप्पणी हुने गर्दछ । यस्तो टीकाटिप्पणीले साहित्यकारलाई उत्साहित र निरुत्साहित दुबै तुल्याउँछ । तर यस्तो आलोचना अग्रिम रुपमै पाउन सक्यो भने उसले आफूलाई पर्याप्त सुधार गर्न सक्छ । यस्तै अभ्यास पछिल्लो समय मकवानपुरमै सम्भवत : पहिलो पटक मकवानपुरका युवा साहित्यकार सुवास खनालले दुई साताअघि कवितासङ्ग्रहको तयारीस्वरुप आफ्नो विभिन्न समयमा प्रकाशित फुटकर साहित्यिक रचनालाई समीक्षात्मक टिप्पणी गराउनुभयो । उनै साहित्यकारसँग सम्बृद्ध समाजले गरेको साहित्य वार्ता ।
१) साहित्यमा प्रकाशनपूर्व अन्तरक्रियाको सोच कसरी आयो ?
हाम्रोतिर डिस्कसन कल्चर खासमा सम्वृद्ध भइसकेको छैन । पश्चिमा साहित्यमा यो चलन अलिक बढी छ । लेखनमात्र ठूलो कुरा होइन । त्यसको सामाजिक प्रभाव सबैभन्दा बलियो हुने गर्दछ । ‘लेख्यो सकियो’ भन्ने पक्षमा खडा हुने केही लेखकहरु पनि छन् । तर म त्यस पक्षको लेखक होइन । रचनाको बृहत्तर पक्षको जानकारीपश्चात मात्र प्रकाशनमा गयो भने त्यो बढी उत्पादक रहला भन्ने मेरो विश्वास हो । म हचुवालेखनको विपक्षी लेखक हुँ । हाम्रोमा आफूले लेखेको सबै राम्रो, संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठान्ने र अरुको लेखनलाई स्विकार्न नसक्ने तथा अलिक आलोचनात्मक टिप्पणी सहन नसक्ने । त्यस्तै एउटा झुन्डमा बसेर एकले अर्कोको प्रशंशा गर्ने र सारा लेखन नै ध्वस्त पार्ने अभियानमा छन् । लेखक आफू नै एक किसिमको सचेत समीक्षक त हो नै तर ऊ पनि धेरै ठाउँमा लिकेजमा पर्न सक्छ । त्यसैले उसले आफूलाई पाठकको अदालतमा त उसले उभ्याउनु नै छ । म नार्सिससहरु भन्दा अलिक फरक बन्ने प्रयत्न भने गरेकै हो । मैले अन्तरक्रिया कार्यक्रमकै दिन फेसबुक सामाजिक संजालमा पनि स्विकारेको छु कि म लार्भा अवस्थामा छु ,लार्भाको विकासपछि बन्ने लामखुटटे हुनु मेरो रहर होइन, म पुतली वा रेशमकीरा हुन चाहन्छु । यसर्थ यो प्रयासमा होमिएको हुँ । यो मलाई थाहा छ कि फूलको अर्थ र महत्व बुझ्न सर्वप्रथम काँडाको सौन्दर्यशास्त्र बुझ्न जरुरी छ । यथार्थताका विभिन्न काँडाघारी छिचोलेपछि मात्रै जीवनका सुन्दर रहस्यहरुमाझ पुग्न सकिन्छ । यी सबै विचारहरुको समष्टिगत परणिाम नै यो कार्यक्रम थियो ।
२) यसले तपाईको साहित्य रचनालाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
मानिसले स्विकार्ने त्यही पक्ष हो , जुन उसलाई मनन योग्य लाग्दछ । मनन नभएका कुरा उसले स्विकार गरिरहन्छ भन्ने होइन । इनफोर्स गरियो भने, विषय मानिसको छालाका रौँहरुमा टासिएर त्यो त्यत्तिकै टकटकिन सक्छ । यो व्यक्तिस्वभावमा फरक पर्न सक्दछ । मैले पनि त्यस कार्यक्रमबाट धेरै फिडब्याकहरु पाएको छु । करिब १० जना समीक्षकहरुले फरक फरक किसिमका सुझाब दिएका छन् । यस पक्षमा विचार विमर्श गर्ने नै छु । विचार विमर्शपश्चात् आफूलाई अनुभूत भएको सही पक्षलाई सुधार्न यथासम्भव कोसिस गर्नेछु । यो विचार विमर्शपश्चात मैले धेरै सुझावहरु प्राप्त गरेको छु । कतिपय त समीक्षकहरुसँग बसेर गफ गर्न नै बाँकी छ । समग्रमा यो विमर्शको प्रभाव मेरो साहित्यिक लेखनीमा निकै सकारात्मक रहने अनुभूत गरेको छु । मानिस आफैलाई प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोणले हेर्न मनाही गर्छ । मेरो दृष्टिमा त्यो जत्ति भयानक र खतरनाक नकारात्मक पक्ष केही हुने छैन । विद्वान समीक्षकहरुले जुन सुझाव प्रदान गर्नुभएको छ मेरा निम्ति त्यो निकै महत्वपूर्ण र अर्थयुक्त छ । समग्रमा ममा यसको प्रभाव उत्पादक नै छ ।
३) यो साहित्यमा नयाँ प्रयोग पनि हो नि ?
म नयाँ भन्दैमा त्यसलाई अचम्म र जादुइ दृष्टिकोण चढाइहाल्नु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको व्यक्ति होइन । तर प्रभावमूलक नयाँ पक्ष आयो भने स्विकार्नु पर्छ भन्ने मान्छे हुँ । खासमा यो नयाँ कुरा होइन र हेटौँडा वा नेपालको सन्दर्भमा भने अलिक नयाँ हुन पुगेको अवस्था रहला । अनौपचारिक रुपमै भएपनि लेखकहरु प्रकाशनपूर्व अन्तरक्रियामा त हुन्छन् नै तर औपचारिक रुपमै यो प्रयास भने नौलो भएको हुन सक्दछ । म यहाँ पाठक तथा सचेत वर्गमा यो आग्रह गर्दछु कि नयाँ भन्दा महत्वका दृष्टिले बढी प्राथमिकतामा रहन सक्यो भने त्यो महत्तम र उपयुक्त ठहर्दछ ।
४) अन्तरक्रियाबाट तपाइलाई उत्साहित बनाउने र निरुत्साहित पनि पार्न सक्ने कस्ता प्रतिक्रियाहरु आए ?
मलाई त सबै दृष्टिकोणबाट उत्साहपूर्ण बनाउने प्रतिकृया नै आएको अनुभूति भयो । यदी समीक्षकहरुमा दुराग्रहको कुनै पारो रहेछ भने त्यो त असत्य रहने नै भयो । त्यसले मलाई त्यत्ति हानी पु¥याउँदैन । म त एकदमै उत्साहित छु । मैले अझै सुध्रिनु छ र आफैँलाई अझै धेरै समीक्षात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु जरुरी छ भन्ने अनुभूति गराएको छ । रोबर्ट फ्रस्टले धेरै समय पहिले नै भनिसकेका छन् –‘एन्ड माइल्स टु गो बिफोर आइ स्लिप’। बास्तवमा हरेक लेखकको वर्तमानभन्दा भविष्य अत्यन्त अति सुन्दर हुन्छ किनकी यिनीहरु भविष्यको आकाङ्क्षी हुन् । म त कुनै पनि ढङ्गबाट निरुत्साहित तुल्याउने प्रतिक्रिया आएको नै देख्दिनँ । यो संसारका कुनै मानिस पूर्ण छैनन् । हरेकको गति पूर्णतातिर हुन्छ तर पूर्णताको प्रतिबिम्बन कुनै मानिसको अनुहारमा टाँसिन सम्भव हुँदैन ।
५) यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाउन सक्छ ?
त्यो त मैले ग्यारेन्टी गर्ने कुरा रहेन । लेखकमा यस्तो प्रकृयामा जान थोर बहुत साहस त चाहिन्छ नै । जो कोही यसरी उभिएको त्यत्ति अनुभूत हुन्न तर चेतनशील र लेखनप्रति विश्वास भएका लेखकका निम्ति यो त्यत्ति चुनौतिपूर्ण छैन । लेखकीय इमान्दिारिता भएका सर्जकहरु यसरी उभिनु पर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । मकवानपुर जिल्ला साहित्यका निम्ति सचेत जिल्ला बन्दै गइरहेको सबैले अनुभूत गरिरहेका छन् । मकवानपुरको साहित्यिक परम्परा र संस्कृति त्यत्ति निरीह छैन । विरागजस्ता विराट प्रतिभाले साहित्यिक सिञ्चन गरेको जिल्ला हो यो । समकालीन पुस्ताका तुल्सी थापा, आर. आर. चौलागाईँ , आर. सी. रिजाल,साम्ब ढकाल, निमेष निखिल, लगायत सर्जकहरु सचेत लेखकहरु हुन् । हामी हाम्रो विगत र वर्तमानसँग गौरव गर्न लायक छौँ । हामीमा हिनताको कुनै बिउ रोप्नु जरुरी छैन । यो अभ्यासले निरन्तरता पाउनु नै न्यायोचित हुन्छ । सचेतताको प्रयासलाई त निरन्तरता दिनु नै ठीक होला नि होइन ? निरन्तरता हुनु र नहुनुसँग मेरो आफ्नो व्यक्तिगत गुनासो रहेन तर हामी कतिपय कवि लेखकहरु पाठकीय सोचलाई गुमराहमा पार्ने र आफू स्वघोषित नायकमा रुपान्तर हुन खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ , त्यो मेरो दृष्टिकोणमा खलनायकी मात्र हो । पर्याप्त विचार विमर्शलेनै तात्विक कुनै परिणाम प्राप्त हुनसक्छ ।
६) यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने आधारहरु के के छन् ?
लेखन र व्यवहारबीचको ग्यापलाई मेन्टेन गर्न पनि यस्तो अभ्यास गर्नु जरुरी छ । यो अभ्यासले सधैँ उत्पादनमूलक परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन । तर विमर्शसमूह कस्तो रह्यो भन्ने कुराले यसमा पक्कै भूमिका खेल्दछ । विमर्शसमूह सही र चेतनशील रह्यो भने त्यसले केही परिणाम त अवश्य दिन्छ । कवि वा लेखक वक्तामात्र होइन । उसमा चेतनायुक्त मष्तिष्क र संवेदना बोकेको मन हुन जरुरी छ । रुढ कविको आवश्यकता कुनै पनि समय र परिस्थितिले अपेक्षा गर्दैन । डबल स्टान्डर्ड बोक्ने कवि लेखकहरुले हाम्रो साहित्य ध्वस्त पारेका छन् । हाम्रा कवि लेखकहरु धेरै खोक्छन् तर व्यवहारमा सर्वाधिक कमजोर छन् । संस्कृतमा एउटा भनाइ छ –‘वादेवादे जाएते तत्वबोध’ क्रिया प्रतिक्रियाबाट नै निष्कर्ष निस्किन्छ । यो सत्य हो कि यहाँ दूधले नहाएका हामी कोही छैनौँ ।
७) मकवानपुरको साहित्यले अहिलेको समाजको कुन पक्षलाई बढी ध्यान पुयाउन सकेको जस्तो लाग्छ ?
मकवानपुरको साहित्यमा पुस्ता हस्तान्तरण पनि एक किसिमको आवश्यकता हो । नयाँ पुस्ताले आफूभन्दा अग्रज पुस्तालाई सम्मानको दृष्टिले हेर्नु जरुरी छ र अग्रज पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई मायाँ र प्रेमको दृष्टिले हेर्नु जरुरी छ । यहाँ अन्य सबै पक्ष सबल रहे पनि एक अर्काप्रति सम्मानभाव कम देख्दछु । साहित्यले गर्ने समाजका विविध पक्षहरुको कनेक्सन हो त्यसमा मकवानपुरको साहित्य सफल छ । यहाँ उस्तो भेलबाढीजस्तो जमात छैन । जसजसले लेख्छन् ती सचेत प्रयासका साथ छन् । अलिक समन्वयको भाव विकास गर्ने हो भने मकवानपुरको साहित्य कल्चरल्ली बढी सशक्त हुनेछ ।
Posted by subas at 5:58 PM Links to this post
commentry on the poetry of Nimesh Nikhil
उमेरको नदीमा जीवनडुङ्गा खियाइरहेका निखिल ।
निमेष निखिल समकालीन पुस्तामा आफ्नो उपस्थितिको सशक्तता प्रस्तुत गरिरहेका कवि हुन् । यिनको परिचय एकल आयाममा सिमित छैन । लेखनका विविध विधामा उपस्थित यिनको कवि ,समीक्षक र सम्पादकको परिचय बढी बलियो छ । हालसम्म निखिलका दुई काव्यकृतिहरु प्रकासित छन् । ‘मनहरुको परिसर ( २०६५ ) र ‘उमेरको नदी ( २०७० )’ । आयामका हिसाबले ‘उमेरको नदी’ लामा कविताहरुको सङ्कलन भनिएको छ ।
अहिलेको विश्व बजारीकरण र भूमण्डिलिकरणले निलिरहेको विश्व हो । मान्छेका चाहनाहरुले उसलाई डो¥याउँदै लगेर यान्त्रिकताको जञ्जालमा फसाइदिएको छ । आत्मकेन्द्रित र संवेदनाशून्य हुनु अहिलेको मान्छेको प्रथम विशेषता बन्न पुगेको छ । निखिल आशाको त्यस्तो विन्दुमा छन् – जहाँ मान्छेमा सहृदयता र संवेदनशीलता बिउँझिनेछ ।
कविताको आयतन र आकारका विषयमा बहस गर्न सकिने कुरा रह्यो । कविता परम्परामा लामो कविताको त्यस्तो मानक आधार खडा भइसकेको छैन । कविता आयतन र आकारमा विश्लेषण हुने भन्दा पनि यसको सशक्तता महत्वपूर्ण हुन्छ र भाव सघनता कविताको अत्यन्त अपेक्षित पक्ष हो । विश्वप्रसिद्ध कविहरु तिनीहरुको कविताले सिर्जना गर्ने प्रभाव र तापले संसारभर स्थापित भएका हुन् न कि कविताको आयतनले । निखिलका कविताहरु लामा भएकाले राम्रा भएका होइनन् , राम्रा भईभई लामा छन् ।
‘उमेरको नदी ’ जुन कवितासङ्ग्रहको शीर्षक कविता पनि हो , निखिललाई यही कविताका कारण पाठकले भुल्न सक्ने छैनन् । ग्राम्यपरिवेशको सफल स्केच छ यस कवितामा र ग्राम्य जीवन भोगेका पाठकलाई नोस्टाल्जिक बनाइरहन्छ अन्तिम पङ्क्तिहरुसम्म ।
बाँसझ्याङबाट मकैबारीमा धावा बोल्ने रङ्गीन सुगाहरु
र फड्केमा अड्किएर झोक्राएको एउटा बाँसकटेरो
कोइराला र टाँकीका रुखमा पिङ खेल्ने समयको झङ्कार
एउटा मोहक सपना , निदाएका नानी आँखामा हाँसिरहेको
उमेरको यो नदी त्यतैबाट बग्दै आएको हो ।
पृष्ठ २, उमेरको नदी
निखिलका कविता दुर्बोध्य र जटील छैनन् ,सरल तर बोधगम्य लाग्छन् । आशाको सबल प्रस्तुती उनको कविताको शक्तिशाली पक्ष हो । अहिलेको समय र हाम्रो परिवेश आशाको लागि उति योग्य बनिरहेको छैन । यस्तो विषम घडीमा उभेर पनि उनी निरन्तर सुसमयको आकाङ्क्षी छन् । निखिलका कविता त्यसकारण पनि सशक्त छन् ।
कवि निखिल मान्छे र मानवतापे्रमी लेखक हुन् । उनका कविताका मूल मर्महरुमा मान्छे र मान्छेभित्रको सौन्दर्य खोज बढी प्रतिबिम्बित हुन्छन् । कवितामा मन पक्ष र मष्तिष्क पक्षको उचित संयोजन गराउने निखिल कवितालाई मनोविलासमात्र मान्नेहरुको विपक्षमा उत्रिन्छन् र कविको सामाजिक दायित्वप्रति सजग रहेको देखिन्छन् ।
यस सङ्ग्रहभित्र पन्ध्र लामा कविताहरु छन् । त्यसअन्तर्गत तीन अकविता श्रेणी छन् । यी कविताहरु लामा हुनुले क्रमभङ्गता पनि हुँदो रहेछ । भत्किँदै ,जोडिँदै गर्दा बेलाका बिम्बस्वरुपहरु मोहक अनुभूत भइदिँदा रहेछन् ।
कवि श्यामल भन्छन् –निखिल लेखनमा प्रतिबद्ध कवि हुन् , शालीन, भावुक, स्वयम् परिश्रमी र अरुका परिश्रममा विश्वास गर्ने ,मानवीय दृष्टिसम्पन्न र त्यस्तै दृष्टिका आकाङ्क्षी कवि हुन् । निखिलका व्यक्तिस्वभाव पनि कवितामा प्रतिबिम्बन हुने गरेको अनुभूति हुन्छ ।
मान्छे खोला भएर बग्न सक्छ आत्मियताको
मान्छे पर्वत भएर अग्लिन सक्छ मानवताको
आत्मियता र मानवताले कसैको कुभलो गर्खैन
त्यसो भए मान्छे खोला किन नबन्ने ? पर्वत किन नबन्ने ?
पृष्ठ ४९, मान्छे कविता
समकालीन चेत र काव्य सचेतता भएका कवि निखिलका कवितामा इकोकल्चरल पक्ष पनि सुदृढ भएर आउँदछ । अकविता सिरिजका कवितामा संरचनागत रुपमै प्रयोगपरकता देखिन्छ । कविहरु अन्याय र अत्याचारको विपक्षमा सधैँ टड्कारो उभिन्छन् । निखिलका कवितामा सवाल्टर्नका आवाजहरु आएका छन् ।
सर्टिफिकेट छैन ऊसँग
तर जीवनको असङ्ख्य अक्करे भीर छिचोल्ने
अर्को अघोषित हिलारी पनि हो साइँलो
लेकबेसी चहारेर जीवन अन्वेषण गर्ने कोलम्बस हो साइँलो
पृष्ठ ९५, दु :खका सुसेली
निखिलका कवितामा धेरै सबल पक्षहरु हुँदाहुँदै पनि उनका कवितामा केही सिमितताहरु छन् । भावगत पुनरावृत्तिबाट उनका केही कविताहरु बच्न सकेका छैनन् । कवितामा भाव सघनता विशष्ट पक्ष बनेर आउँछ तर यस सङ्ग्रहका केही कविताहरु सघन बन्न सकेका छैनन् । कविताकृति हतारमा निकालिएजस्तो र कागज गुणस्तरमा ध्यान नपुगेको अवस्था देखिन्न ।
क्रमश : कवितात्मक उचाइ लिइरहेका निमेष निखिललाई टपमोस्ट फिगरका निम्ति काव्यिक भविष्यको शुभकामना ।
Posted by subas at 11:38 AM Links to this post